Faah faahin weerarki maanta ee Sanguuni , Jubada Hoose. – Hornafrik Media Network
Faah faahin weerarki maanta ee Sanguuni , Jubada Hoose.
By HornAfrik	 On Jul 23, 2018
Hornafrik-Waxaa Hornafrik ay dedaal u gashay sidii ay aqristayaasha ugu soo gudbin lahayd xaqiqada wararka ku saabsan weerarki Shabaab ku qaadeen Saldhiha Ciidanka Xooga ee BaarSanguuni Gobolka Jubada Hoose.
Weerarka oo ku bilowday gaari qaraxyo sida ayaa Waxaa ku dhintay ku dhawaad 20-kamid ah askarta Milatariga Soomaaliya , hase ahaatee saraakiisha Jubaland waxay sheegeen in ay ka dhibteen tiro intaasi ka yar , dhanka Shabaab na ay ka dileen ku dhawaad boqol dagaalame.
Balse wararka madaxa banaan ayaa sheegaya in Shabaab ay mudo kooban gacanta ku dhigeen Saldhigga ay weerareen , waxaana ilo madax banaan ay xaqiijiyeen in Shabaab laga dilay ku dhawaad 50-dagaalme kuwo kale na laga dhaawacay ,
Meydadka dagaalamayaal Shabaab ah ayay ciidanka ku soo bandhigeen halka lagu dagaalamay.
Dowladda Soomaaliya oo war ka soo saartay weerarka ayaa waxaa ay sheegtay in 87-dagaalame laga dilay Shabaab , ciidanka xooga iska difaaceen dagaalka.
Madaxweyne ku xigeenka kowaad ee Jubaland Maxamuud ayaa gaaray Sanguuni waxaana lagu wadaa in warbaahinta uu la hadlo.
Tirada Jaamacadaaha iyo iskuulada dalka oo la yareynayo!